30 Askari Oo lagu dilay Weerar ka dhacay Maali. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
30 Askari Oo lagu dilay Weerar ka dhacay Maali.
On Apr 13, 2020 429 0
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaaday weerar xasmin ah oo aad u ballaaran, kaas oo lagu qaaday saldhig milliteri oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan kuwa xukuumadda Maali.
weerarka waxa uu si gaar ah kaga dhacay xarun milliteri oo ku taalla deegaanka Bamba ee hoostaga magaalada Gaaw ee Maali, waxaana ka dhashey khasaare xoogan oo kala duwan.
Aroornimadii hore ee 15-kii bishan Shacbaan, ayaa ciidama tiro badan oo katirsan Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay weerar dhowr jiho ah ku qaadeen saldhiga Bamba, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan xukuumadda Maali.
Weerarka waxaa lagu billaabay duqeyn culus oo loo adeegsaday qoriga hoobiyaha, waxaana in muda ah oo ay socotay duqeynta kadib, xerada ku taqadumey ciidamo si gaar ah u tababaran oo katirsan Nusratul Islaam Wal Muslimiin.
Sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay mu’assasada warbaahineed ee Az-Zallaaqa, dagaal in muda ah socday kadib waxay ciidamada Mujaahidiinta la wareegeen saldhiga, iyadoo ay dhiimasho iyo dhaawac noqdeen inta badan ciidankii halkaas joogay, halka ay qaarkoodna baxsadeen.
Khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada Xukuumadda Maali, wuxuu bayaanku ku sheegay dhimashada 30 askari, halka ay jiraan ciidamo kale oo dhaawacmey, xeradana ka cararay iyagoo aad u liita.
Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay duulaankaas kusoo furatay saanado hub ah oo kala duwan, kuwaas oo ay xerada Bamba kaga carareen askarta xukuumadda Maali, waxaana hubka gacantooda ku dhacay kujira hoobiyaal, RBG-yo, Bkm-yo iyo qoriyaal tiro badan.
Sida bayaanka Az-Zallaaqa kasoo baxay lagu sheegay, waxay qazwadan kusoo aaday iyadoo dowaldaha reer galbeedka uu aad ugu dhex faafayo cudurka Coronavirus, kaas oo kumanaan dad ah ay maalin weliba u dhimanayaan.
Cudurkaas ayaa isku dhex yaac ku keenay isbaheysiga Faransiisku hogaaminayo ee duulaanka ku jooga Mali, waxaana dowladda Spain ay sheegtay iney ciidamadeeda sida ugu dhaqsiyaha kagala bixi doonto wadamada saxaraha iyo saaxilka Africa.
Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay is waydiisay suurtagalnimada in Faransiiska isaguna soo afjari doono duulaanka gardarada ah ee uu ku joogo wadamada muslimiinta oo ay Maali ku jirto, xilli weliba Coornavirus uu ka dhex dillaacay markab dagaal oo ay saaranyihiin boqollaal askari oo Faransiis ah.
Jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa ka dagaalanta wadamada saxaraha iyo saaxilka Africa, waxaana si firfircoon ay uga howlgashaa wadamada Maali iyo Burkina Faaso, hallkaas oo ay ka geysaneyso weeraro xasuuq ah oo ka dhan ah isbaheysiga Farnsiisku hogaaminayo.